Le ekwazi ezintlanu kunye paylines amathathu slot, Luchadora kuxhaswa yi Thunderkick Software. lo Slots ibhonasi umdlalo iphefumlelwe ukucinga kakhulu Mexican imithwalo umnikelo njengomdlalo lokuzonwabisa kubadlali.
lo Slots ibhonasi umdlalo iqulunqwa yi yinkampani abatsha kodwa ethembisa ngokuba Thunderkick ngentsebenziswano ne Nyx. Le midlalo intanethi eziveliswe le nkampani neqela lemixholo ezahlukahlukeneyo kunye Ukudlala creative.
lo Slots ibhonasi umdlalo kuba ekwazi ezintlanu kunye imiqolo slot zine kuthetha ukuba kukho imiqondiso ezine emasondweni ngalinye. Le paylines ezingamashumi Luchadora ayinakutshintshwa. Lo mdlalo bunikwa kwi ring ekubambaneni ezimbombeni zaso zone iphawulwe kunye neepowusta ezininzi wrestling ukuba ugcwele ngayo. Iimbombo eziphawulwe iya kuba nendima enkulu features bonus. the Slots ibhonasi umdlalo idlalwe ukusuka ubhejo ubuncinane 10p kwaye ukuya ubhejo ubuninzi £ 100 ukujikeleza nganye izixhobo ezihambelanayo. Ezine wrestlers efake El Toro, Rayo, Snake, no El Pantera, kwakunye feisty and esadlula Campeon, ezi icon eziphakamileyo-ixabiso kwi reel. Isimboli esezantsi-value zimelwe imifuno Mexican original ezifana iipepile kunye chillies ngemibala eyahlukileyo. lo Slots ibhonasi umdlalo iqulethe iimpawu bonus ezimbini. Bona imelwa Lucha Smackdown kunye Luca uphawu Bonus.
Lucha Smackdown- Xa umdlalo rhoqo, lo amazwe icon kuphela emasondweni 5 namabhaso nawe 7, 11, okanye 15 osebenzisa simahla yaye uyabavuza kuwe ukuya ku 15x wokuphindaphinda.
Lucha Free osebenzisa- Olu phawu iqalwa igqampe ezintathu okanye ngaphezulu Lucha ibhonasi icon. ufumana 7, 11, yaye 15 osebenzisa free for kokufika 3, 4, okanye 5 iisimboli bonus. Ezimbombeni ring olusebenzayo kweli phawu. Nasiphi na kwendiza wrestling kuyo nayiphi na kubo uya kuhlala zasendle ngexesha lo msebenzi. Zonke wrestlers ezine ukutshintsha ibe endle yenza icon inzuzo ngakumbi La Luchadora ukuthatha indawo yonke imifanekiso Misterioso Campeon.